New article: Izinkolelo Ngokukhulelwa – The Ulwazi Programme
Izingane emshadweni kwakuyinto ebalulekile ngoba kwakwaziwa ukuthi umuzi uzoqhubeka udlondlobale kwande isibongo somuzi, ikakhulukazi uma kuyizingane zabafana. Kwakwenzeka ukuthi umakoti abenenkinga yokungabatholi abantwana. Ziningi izinto ezazenziwa ukuthi asizakale njengokuthi wayelashwa noma kucelwe nasemadlozini ukuthi amsize akwazi ukukhulelwa. Kunezinkolelo eziningi ezihambisana nokukhulelwa komuntu ngezinto noma ngendlela ekufanele aziphathe ngayo ngesikhathi leso. Kanjalo nomuntu owayesefuna umntwana naye kwakunezinto ayekholelwa kuzo njengokuthi uma efuna umntwana omuhle, onomoya omuhle wayehamba aye emfuleni ayobuka amanzi lapho ecwathe khona, azibuke naye kuwo.
Umuntu okhulelwe wayengavunyelwa ukuhamba ekuseni kakhulu, kwakuthiwa uzokweqa imikhondo yezilwane neyabathakathi ekade bethakatha ebusuku. Uma kuphoqelekile ukuthi ahambe ekuseni wayeboshelwe okuthile emaqakaleni ukuvimba lemeqo. Umuntu okhulelwe akuvumelekile ukuthi ame alunguze endlini noma aphumele phandle abuye aphindele emuva ngokushesha, ngoba wayeba nenkinga uma eseteta noma ebeletha.
Categories News Tags Izinkolelo Ngokukhulelwa